Nepali Christian Bible Study Resources - मानिसले पाप गरेको दिन
» अध्ययन मालाहरू » महान् घटनाहरू » १-मानिसको पतन
मानिसले पाप गरेको दिन
उत्पत्ति ३:६ को आखिरी तीन शब्दहरू के हुन्? ________ ______ ______। यी तीन शब्दले बयान गरेको घटनाले विश्वलाई नै परिवर्तन गर्‍यो। यस घटनाले संसारै हल्लायो।
मान्छेले पाङ्ग्राको अविष्कार गर्नु ठूलो कुरा थियो। त्यस्तै क्रिस्टोफर कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाउनु पनि। पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकिकरण गर्नु ठूलै घटना मान्नुपर्छ। चन्द्रमामा मानिस पुग्नु ‍विश्वको इतिहासमै ठूलो घटना थियो। तर आज हामी यी सबै घटना (अथवा तपाईंको सोचाइमा हुनसक्ने अन्य कुनै पनि ठूलो घटना) भन्दा पनि महान घटनाको अध्ययन गर्न लाग्दैछौं। यस घटनाले विश्वलाई अन्य घटनाले भन्दा कैयौं गुणा बढी असर पारेको छ।
उत्पत्ति ३:६ मा “उनले” भन्नाले कसले भन्ने बुझिन्छ? _________। परमेश्वरले आदमलाई दिनुभएको सरल आज्ञा के थियो (उत्पत्ति २:१७)? _____________________ ________________________________________________________________________________________________। जुन रूखबाट खान मनाही गरिएको थियो, त्यो स्याउको रूख थियो कि? _______। उत्पत्ति ३:६ को कुन तीनओटा शब्दहरूले आदमको गम्भीर पाप र अनाज्ञाकारिताको बयान गर्छ? _______ ______ _______।
तपाईं भन्नुहोला, आदमले हजारौं वर्ष अगाडि पाप गरे तर मसित त्यसको के सरोकार छ र? के आदमको पापले मलाई असर पार्छ र? के आदमको पापले मेरो संसारलाई असर पार्छ र? यस महत्त्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर रोमी ५:१२ ले दिन्छः “यसकारण जसरी __________ _________द्वारा (आदमद्वारा) पाप संसारमा पस्यो, र ______द्वारा _______ आयो, अनि त्यसरी नै _______ _______ मानिसहरूमा फैलियो, किनकि _______ पाप गरेका छन्। आदमको पापले ल्याएका असरहरू हामी जहाँतहिँ देख्‍न सक्छौं। आज हामी एक पतित, पापपूर्ण संसारमा बाँचिरहेकाछौं। पतित नर-नारीहरू, केटाकेटीहरू सबै नै मृत्युको मुखतर्फ लम्कँदै छन् (उत्पत्ति ३:१९)।
विचार गर्नुहोस्। आज संसारमा निम्नलिखित व्यवसायहरू वा व्यक्तिहरूको आवश्यकता किन छ? आदमको पापले गर्दा नै हो, होइन र?
अन्य उदाहरणहरू दिन सक्नुहुन्छ?
आदमको पापले गर्दा फस्टाउन पाएका उद्योग-व्यापारहरू र मानिसले बनाएका विशेष भवनहरू आज संसारमा के कस्ता छन्? जस्तै, सिनेमा हल, कैदखाना (जेल)।
पत्र-पत्रिकामा वा रेडियोमा आउने के कस्ता खबरहरूले आदमको पापले संसारमा साँच्ची नै असर पारेको छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ? जस्तै, बैंक चोरीको खबर, लडाइँको खबर, समवेदनाहरू। अन्य के कस्ता उदाहरणहरू दिन सकिन्छ?
के विद्यालय जाँदा त्यहाँ आदमको पापको असर देख्‍न सकिन्छ? जस्तै, विद्यार्थीले जाँचमा चोरेको, विद्यार्थीलाई कारणवश अनुशासन गरिएको। अन्य उदाहरणहरू?
मानिसहरूको कुराकानी सुन्दा आदमको पापका असरहरू देख्‍नुभएको छ --उदाहरणको लागि फोहोर बोली, सरापका शब्दहरू, झूटा बोलीहरू। अरू कस्ता उदाहरणहरू दिन सकिन्छ?
सृष्टिका थोकहरूलाई नियालेर हेर्दा मानिसको पापका के कस्ता असरहरू देख्‍न सकिन्छ (रोमी ८:१९-२२)? जस्तै, जनावरले शिकार मारेको, प्राकृतिक प्रकोपहरू, जस्तै आँधीबेरी, भूकम्प, बाढी पहिरो, ज्वालामुखी विस्फोटन। अरू कस्ता उदाहरणहरू पाइन्छन्?
बाटोमा हिँड्दा के कस्ता कुराहरू देख्दा मानिसको पहिलो पापका खराब असरहरू देख्न सकिन्छ? उदाहरणको लागि लाशलाई पोल्न मसानघाटतिर बोक्दै लागिरहेको, पसलमा जाँड-रक्सी बेच्न राखेको, बस दुर्घटना भएको। अरू कस्ता उदाहरणहरू पाइन्छन्?
आदमको पाप र त्यसका प्रतिफलसित निम्न कुराहरू कसरी सम्बन्धित छन्? क) पैसा सुरक्षित राख्‍ने कन्तुर (सेफ) ख) मूर्ति ‍ग) औषधी पसल घ) लुगा-कपडाको पसल (उत्पत्ति २:२५ र ३:७)?
आदमको पापको प्रतिफल तपाईंको आफ्नै जीवनमा देखिन्छ कि देखिँदैन? तपाईंलाई कस्तो कुरा मन पर्छ, कस्तो कुरा मन पर्दैन भन्ने कुराले तपाईंको जीवनमा पाप छ भन्ने कुरा देखाउँछ? तपाईं कस्ता कुरा बोल्नुहुन्छ, कस्ता कुरा बोल्नुहुन्न? कस्ता विचार गर्नुहुन्छ र कस्ता विचार गर्नुहुन्न? अरूसित तपाईं के कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ? मानिसको पतनले तपाईंलाई कस्तो असर पारेको छ?
परमेश्वरले मानिसको पापका डरलाग्दा प्रतिफलहरूलाई हटाउन के गर्नुभएको छ? परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई हाम्रो मुक्तिदाता हुनलाई पठाउनुभयो। “किनकि जसरी ________ मानिसले (आदमले) आज्ञा भङ्ग गरेकोले _________ पापी बनिए (जसमध्ये तपाईं पनि पर्नुहुन्छ), त्यसरी नै _________ (मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्ट) ले आज्ञापालन गरेकोले _______ धर्मी बनाइनेछन् (रोमी ५:१९)। “किनकि जसरी _______ मा सबै मर्छन् उसरी नै _______ मा सबै जिउँदो पारिनेछन्” (१ कोरिन्थी १५:२२)।
निम्न विशेष दिनहरू अर्थात् “दिवसहरू” लाई विचार गर्नुहोस्। ती दिवसहरूमा समेत हामीलाई आदमको पापको सम्झना हुन्छ। १) संविधान दिवस (बहुदलीय प्रजातन्त्र आन्दोलन सफल भए यता नेपालमा मान्दै आएको विदाको दिन) २) मजदूर दिवस (उत्पत्ति ३:१७-१९ हेर्नुहोस्) ३) तपाईंको जन्म दिवस (प्रत्येक वर्ष तपाईं आफ्नो मृत्युको नजिक पुग्दै हुनुहुन्छ) ४) सहीद दिवस (नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन आफ्नो जीवन गुमाएकाहरूको सम्झना गरिने दिन) ६) हप्‍ताको पहिलो दिन (रोमी ४:२५ र १ कोरिन्थी १५:२२)
कसैले भनेका छन्, धेरै वर्ष अगाडि आदमले पाप गरे र हराए। हराएको आदमलाई खोज्न र बचाउन ख्रीष्ट संसारमा आउनुहुँदा उहाँले आदमका थुप्रै सन्तानहरू भेट्टाउनुभयो। के तपाईं पनि आदमका हराएका सन्तानमध्ये एक हुनुहुन्छ? लूका १९:१० पढ्नुहोस् र आजै भेट्टइनुहोस्!
« महान् घटनाहरू
मानिसको दुष्टता र विश्वव्यापी जलप्रलय »